Hal-sanno oo ka soo Wareegtay Xasuuqii Utöya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay fredag 20 juli 2012 kl 09.01
Maalinta axada oo bishu tahay 22 lulyo waxa weeyaan sannad guuradii kobaad ee xasuuqii argagaxa badnaa ee ka dhacay dalka Norwayd 2011. Xasuuqii jaziiradii Utöya iyo falkii bomka loo adeegsadey ee loo gaystay guriga dowladda ee bartamaha Oslo hal-sanno ka hor ma yareynin taageerada xagjeriinta Sweden.
Tusaale, waxaa jira baaritaan muujinaya in taageerayaasha xisbiga Sverigedemokraterna aysan isdhimin oo weerarka ka hore halkii joogtay ay hada joogto. Inkastoo xag-jeriinta dhanka midig ay iska dheereeyeen falkii Anders Behring Breiviks hadana waxay adeegsadaan erayo ay ka soo qaateen qoraal uu qoray Breivik. Sidoo kale kooxahaan ayaan badelin luuqada ay u adeegsadaan muslimiinta iyo soo galootiga, sidaas waxaa yeri Daniel Poohl oo ah tafitiraha wargeyska waqtiilaha ah ee Expo.
- Waxa iska badalay way yartahay. Inkastoo xisbiga Sverigedemokratiga oo noqday mid si guud u foojigan, hadana waxaa dereemi karaa in erayo laga soo guuriyey manafestadii Anders Behring ay adeegsadaan. Waagii hore majirin cid ka hadasha "kulturmarxism" intaanan aqrisan manafestatdii Anders Behring Breivik, taas oo uu kaga hadlayey "kulturmaxism" sida in ay tahay ideologiyad. Eraygaas waa mid hada markasta soo noqnoqda, saas darteed waxaa la oran karaa Breivik saamayn ayuu ku yeeshay luuqadooda oo qaar badan oo katirsan waxay u hadlaan sida asagoo kale, ayuu yeri Daniel Poohl oo ah tafatiraha wargeyska waqtiilaha ah oo ah wargeys dabgal ku sameeya dhaqaaqyada cunsurida iyo shisheeya nacabka ah.
Waxaa maanlinta axada ka soo wareegaya hal sanno markii Anders Behrin Brievik 22 lulyo sannadkii 2011 ku qarxiyey bambaano qaasaro badan dhalisay dhismaha dowladda ee bartamaha Oslo halkaas oo ku nafwaayeen sedeed qof. Waxa uuna kabacdii u sii gudbay jaziirad yar oo layiraahdo Utöya kuna taal meel aan sas uga fogayn magaalada Oslo, halkaas oo ururka dhallinyarada xisbiga Soshiayaaldemokratiga ee Norwayd AUF uu ku qabsanayeye kulamadoodii xiliga sommarka ee caadiga u ahayd in ay halkaas ku qabsadaan oo ayna ka qayb galayeen in kabadan 500 oo dhallinyaro ah. Breivik oo ku labisan dharka ciidanka booliska ayaa dooni ku yemid jaziirada islamarkaana rasaas ooda uga qaaday dhallinyartii halkaa ku sugnayd. Qaar badan oo kamid ah dhallinyarada ayaa markay maqleen rasaasta u soo caray ninka dharka booliska ku labisan oo ay u haysteen in uu yahay boolis sax ah oo aan ka warqabin in ninkaan yahay dilaaga. Waxaa goobta ku naf waayey 69 qof oo ay haleeshay rasaastii anders Breivik, inkaloo badana way ku dhaawacmeen.
Mid kamid ahaa dadkii Jaziirada Utöya ku sugnaa maalintaa waxa uu ahaa Ali Esbathi oo katirsan xisbiga bidixda ee vänsterpartiet ee dalkaan Sweden. Ali waxa uu maantay ka howla-gala xarun afkaar curineed oo ku taala magaalada Oslo. Maalintaas marka asaga iyo kuwo kaloo badan garteen waxa meesha ka dhacaya waxa uu isku tuuray bada halkaas oo dubaalka kaga soo badabaaday. Waxa uu ka sheekaynayaa waxa uu la kulmay markuu bada ka soo baxay oo ay dhawaqa rasaasto istaagtay.
- Markaan ka soo baxahay bada oo aan imid dhulka waxaa la kulmay dhawaq dareen xanbaarsan. Dadka qaar ayaa qaylinayey, qaar way oonayeen, qaar waa aamusnaayeen, halka qaar laabta isku qabanayeen oo isla logeenayeen. Waxay ahayd xaqiiqdii deereemo aan aqli qal ahayn islamarkaan si weyn kuu xasuusinaya in dhibku soo gaaray dad badan. Dadka qaar waxay tabayeen saaxiibadood oo raadinayeeen, ayuu yeri Ali Esbati.
Xasuuqii Utöya ma gelgelin kaliya Norway, dhacdadaan waxay noqotay mid caalamiya taas sii shiday doodaha ku saabsan soo galootiga, aragtida laga haysto Muslimiinta iyo weliba sida loo difaacayo demokratiyada. Inkastoo uusan dilaago saamayn ku yeelan dhaqdhaqaaqyada shisheeyaha naceb hadana waxa uu saamayn weyn ku yeesha afkaarta guud ee dadka ayuu qabaa Dniel Poohl.
- Dilaagu waxa uu saamayn weyn ku yeeshay dhaqdhaaqyada ka soo horjeeda cunsurinimada. Waxa uu dilaagu sameeyey in uu indhaha dadka ku soo jeediyo cunsuriyada iyo isku dulqaad xumada miraha ay dhali karto. Waxaan qabaa intaas tahay isbadelka ugu weyn oo laga dhaxlay.
Markay socotay maxkamdaynta Anders Behrin Breivik ayaa waxaa soo shaac baxday in Ali Ebati iyo oo xaamilo ahayd in ay bartilmaamed u ahayd weerarkii Breivik uu ku qaaday jaziirada Utöya. Esbati ayaa markaa asagu ku sugna goobta ay maxkmado ka socotay markii uu arintaan shaaciyey Breivik. Maxkamadaynta ayaa si toos ah looga siideynayey radioyaasha iyo telafishanad. Arintaas waxa uu Ali qabaa in ay ahayd mid wanaagsan.
- Waxaan aaminsanahay in ay ahayd arin wanaagsan oo muhiimad u leh shoogaan la baahiyo oo ay dadka la socdaan sida ay wax u dhaceen, uguna fakaraan saamaynta ay mustaqbalka yeelandoonto. Ayuu Ali esbati
Qaadista dacwada Breivik waxa ay socotay in ka badan toban asbuuc go'aanka maxkamdana waxaa la sugayaa in uu soo baxo 24 bisha Augusti. Inta ay dacwado socotay waxaa soo baxayey hadalo isdiidan oo ku saabsanaa xaalada caafimaad maskaxda ee Breivik. Laakiin Daneil Poohl oo katirsan Expo ayaa qaba in aysan muhiimad lahayn xataa hadii layiraahdo Breivik waa nin aan caafimaad qabin oo waalan iyo hadii layirahdo waa nin caafimaad qaba argagixiso islamarkaana ideologi waday.
- Waxaan kawadaa waad ahaan kartaa qof maskaxda ka waalan oo islamarkaan ay ideologi wado, waa arin suurto gal ah. Ahdii maxkamado go'aankeedo noqdo in uusan caafimaad qabin oo lagu xukumo in la siiyo daryeel caafimad , waxay taa ka micno noqonaysaa in falkaan xasuuqa ah uu gaystay qof waalan oo aysan waxa waday sal kulahayn afkaar, arintaas waa mid qatar ah. Hadiise maxkamdo ku xukunto taa minaheedo ma,ahan in dhamaan dadka dhaleecayan soo galootiga ay rabaan in ay wax xasuuqaan.